ए आमा म छोरी हैन र ? - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
ए आमा म छोरी हैन र ?
सोमवार, भदौ १२, २०७४
- —रमा पौडेल
दाइलाई अंश मलाई क्यै छैन र ?
लैगिंक दृष्टिले हेर्दा तीजपर्व नेपाली महिलाहरुको स्वतन्त्रताको चाड हो । आज यस चाडलाई नेपालमा मात्र नभइ विश्वका विभिन्न मुलुकमा पुगेका नेपाली चेलीहरुले पनि धुमधामसंग मनाइरहेका छन ।रेडियो टेलिभीजन र घरघर मा तीजका गीतहरु घन्किएका छन । तीज पर्व महिलाहरुको आफना मनका कथा ब्यथा पोख्ने पर्व पनि हो । समाजिक र पारिवारिक दमन सहेर बस्न बाध्य भएका महिलाहरु प्नि तीजको दिन खुला आकास मुनी नाच्छन । आज त महिलाहरु शिक्षा र रोजगारीका लागि बिदेशसम्म पुगेका छन तर यस्तो अवस्था पहिले थिएन ।श्रीमति तथा बुहारीहरु घरलु बैधानिक नोकर जस्ता थिए। त्यस्तो समयमा पनि पीर दुख र बेदना पोख्ने स्वतन्त्र दिन बन्यो तीज ।यस दिन मनका ब्यथालाई ्गीतबाट पोख्न कसैलाई छेकथुन थिएन ।बर्षभरी काममा जोतिएका दिदिबैनीका लागि तीज एक दिन भएपनि राम्रो लुगा लागाएर बाहिर निस्कन पाएको स्वतन्त्र दिन थियो ।पढने लेखने स्कुल जाने कुरा टाढैका कुरा थिए तर पनि गिती कथाबाट उनीहरुले आफना ब्यथा बाहिर ल्याउथे । घरेलू हिंसा ,दमन र बिद्रोहका स्वर पनि प्रस्तुत हून्थे ।
तीज मनाइरहदा यसको शुरुवात कसरी भयो र यसको महत्व के छ ? त्यसको जानकारी सहित पुस्तान्तरण गरिएन भने यसको इतिहास मेटिन्छ वा यसलाई तोडमडोर गरिन्छ । तीजलाई हरितालिका तिज भनेर मान्ने गरिन्छ । यसको शाब्दिक अर्थ “ सर्खिर्भीहरिता यस्मात तेनेप हरितालिका” अर्थात् सखीहरुले हरण गरेर लगेको हुनाले हरितालिका भनिएको रहेछ । सत्य युगमा सतिदेविले आत्मदाह गरेपछि उनैले पार्वतिको रुप लिएर जन्मेको कुरा हामीले स्वस्थानी ब्रतकथामा पढेकै छौ । तिनै कन्या पार्वती ठुली भएपछि उनका पिता हिमालय पर्वतले विष्णु भगवानसंग विवाह गरिदिने तयारी गर्नथाले । तर पार्वति भने महादेवलाई पति बनाउन चाहान्थिन । यो विपदबाट जोगाउन उनले साथिहरुलाई गुहारिन । साथिहरुले पार्वतीलाई जंगलमा लगेर कसैले नदेख्ने ठाउमा लुकाएर राखिदिए । त्यही जंगलमा कन्दमुल खाएर पार्वतीले कठोर तपस्या गरी बसिन । उनको तपस्याबाट खुसी भएर महादेव प्रकट भइ इच्छासिद्घिको बर दिए ।
यसरी पार्वती र महादेवको बिबाह सम्पन्न भयो । त्यही खुशियालीमा दर खाने र ब्रत बस्ने चलन चलेको भनाइ छ । यसरी यो दिन प्रेमले सफलता पाएको हुनाले यस पर्वलाई प्रेम दिवशको रुपमा पनि लिन सकिन्छ । अर्कोतिर आर्यकुल की पार्वति र किरात कूलका महादेवबीचको अन्तरजातीय विवाहले मान्यता पाएको दिनको रुपमा पनि यो तिज पर्वलाई लिन सकिन्छ । यस दिन अर्धनारीश्वर को पुजा गरिन्छ । अर्धनारीश्वर आधा पुरुष र आधा महिलाको मुर्ति हो । यसको पुजा हुनु महिला र पुरुष समान हुन भन्ने कुरा को पुस्टायाइ पनि हो । नेपाली महिलाले धुम धाम संग यो पर्व मनाउनुको गहिरो रहस्य पनि यसैमा लुकेको छ ।
चार्ड पर्व, धर्म ,संस्कृति यी सवै हाम्रा राष्ट्रिय चिनारी र गौरव हुन् । यी गौरवहरुलाई जोगाइ राख्नु प्रत्येक नेपाली पुस्ताको कर्तब्य हो । जनता भूमि , सरकार, चाडपर्व, भेष–भुसा, भाषा, बिभिन्न रितीरिवाज यी सबै कुरा मिलेर नै सिगो राष्ट्र बनेको हुन्छ । यी सबै राम्रा कुरालाई जस्ताको तस्तै नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण गर्नाले नै हाम्रो राष्ट्र«« र राष्ट्रियता जोगिन्छ । त्यसैले यी सास्कृतिक चाड–पर्व मनाउनु भनेको संस्कृतिको संरक्षण र यसको महत्वलाई नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण गर्नु हो । यदि मनाउन छाडयो भने विस्तारै यि सबै लोप भएर जानेछन । चाडपर्व भेषभुषा र भाषा हराएमा राष्ट्र नै धरापमा पर्नेछ । त्यसैले यो कुरामा ध्यान दिनै पर्दछ । हामीले लाउने गरगहना पनि राट्रियतासंग गासिएका छन । राष्ट्रिय झण्डामा सुर्य र चन्द्रमा छ भने हामीले लाउने गहना चन्द्रक्लिप र शीरफूल सुर्य र चन्द्रमाकै प्रतिक हुन । समय बदलिदै जाँदा हाम्रा कार्यशैली र ब्यबहार पनि बदलिदै जान्छन । यसरी पुस्ता हस्तान्तरण गरिरहँदा यो पर्वले बोकेको मोैलिकतालाई छाड्नु हुदैन ।
वर्तमान परिस्थितिमा यस चाडलाई मनाउने मौलिक सास्कृतिमा परिर्वतन हँुदैछ र तीज अति आधुनिकता तर्फ अगाडि बढदै छ । हिँजोका समयमा तीज महिला माथिका विभेदका कुरा पोख्ने दिन थियो तर आज महिलाको अवस्थामा पनि परिर्वतन आएको छ । शिक्षा, रोजगारी र राजनितिमा पनि महिलाको पहुँच बढ्दै छ ।आज माइतीको आगनबाट तीज बाहिर निस्किएको छ । एक छाक मिठो खानका निम्ति माइती पुग्नै पर्नै परिस्थिति अहिले कम्तिमा पनि मध्यम वर्ग र त्यो भन्दा माथिका महिलामा त्यति धेरै छैन । महिलाहरु आफैँमा आत्म निर्भर बन्दैछन । माइतीको आँगनबाट तीज बेलायत र अमेरिकाको आगनमा पुग्दै छ । शहरमा महिनौसम्म पार्टी प्यालेसमा भोज भतेर गरी तिज मनाइरहदा लाग्छ यो खुशि साट्ने चाड बन्दैछ र यसको मौलिक गरिमा बिर्सदै गएको आभास भएको छ । तीजका गीतको मौलीक माकालाई पनि बिर्सिदै छ ।
महिलाको साझा महान चाड मनाउने तरिकामा पनि विभेद देखिदैछ । एकातिर महंगा लुगा र गहनाको प्रतिस्पर्धा र प्रर्दशनको चाड बन्दै छ भने अर्काेतिर महिला अझै साझ बिहानको छाक टार्ने एकसरो लुगा लगाउने र आफना बालबच्चा पढाउन पनि धौ धौ हुने परिस्थितिमा छन । महगा गहना र विदेशी महगा लुगाको खरिदको प्रतिस्पर्धाले राष्ट्र«को पुजी अनुत्पादक र स्थिर बन्न जान्छ । थुपारिएको सुन या त चोरी र हत्या–हिँसाको सिकार बन्छन या त बैकका लकरमा स्थिर हुन्छ ।तेसैले दिदिबैनीहरु महगा गहना र महगा भडकिला सारीको खरिद गर्ने र देखाउने फेसनलाई कमि गरौ । विदेशमा बस्ने महिला दिदिबैनीले यो कुरामा अझ ध्यान दिउ । तपाइहरुले विदेशमा दुख गरी कमाएको धनले एउटा भएपनि नेपाली दिदी बैनीलाई रोजगारी दिन सक्ने उत्पादनमुलमक काममा तपाइहरुको श्रम पसिना प्रयोग होस । यसतर्फ ध्यान दिउ र सवै नेपालीले साझारुपमा मनाउन सक्ने धनी र गरिवको दरार नदेखिने साझापर्वको रुपमा यस चाडलाई विकास गरौ । धेरै ठूलो तडकभडकलाई तोेडौ ।
तीजमा दर खाने र ब्रत बस्ने परम्परामा पनि परिर्वतन गर्न जरुरी छ ।एक दिनको दरलाई एकदिनमै मनाउनु पर्दछ न कि महिनौ सम्मको भडकिलो दरलाई अन्य गरौ । पतिको दीर्घजीवनका निम्ति ब्रत बस्ने परम्परा छ । स्वास्थ्य बिज्ञानका दृष्टिले हेर्दा सत्यता कहाँ छ ? एउटाले उपवास गर्ने र फल अर्कोले पाउने कुरामा सत्यता देखिदैन । उपबास जसले गर्छ फल पनि उसैले पाउछ । स्वास्थ्य पनि उसैको राम्रो हुनेछ । राम्रो र दीर्घ जीवनका लागि दुवैले उपवास गर्नु राम्रो हुनेछ । यो पर्व नारी–पुरुष समानताको पर्व हुनाले पुरुषको लागि निराहार ब्रत बस्ने श्रीमानको खुटटाको जल खाएर ब्रत तोडने जुन परम्परा अझै कतै बाकी छ भने त्यो दास मनोबृतिको परम्परा लाई तोडनु आवश्यक छ ।
हाम्रो मुलुकमा समाबेशी लोकतन्त्र विकशित हुँदैछ , । त्यसैले तीज पर्वलाई पनि हामी सवै नेपाली महिलाले साझा चाडको रुपमा अझै बिकसित गरौ । फरक जातजाति र भाषा–भाष्ीा भएको हाम्रो देशमा सवै पर्वहरुलाई समावेसिरुपमा मनाउने परम्पराको बिकासले नै एक अर्कामा मेलमिलापको भावना बिकसित हुनेछ र यसले राष्ट्रिय एकतामा बल मिल्नेछ । पुजिबादी संस्कृतिको फैलदो प्रभावले आज नेपाली दम्पतीहरुमा एकले अर्कोलाई छल्ने र ढाँट्ने सस्कृतिको विकास हुदै गर्दा तिजको मौलिक गरिमाको महत्व अझ बढ्दो छ । प्रत्येक नेपाली दम्पतिको वीचमा शिव र पार्वतीको जस्तो प्रेम सधै रहिरहोस । पारिबारीक प्रेम र सदभाव बढाउन यो तीज पर्वले सहयोग पुरयाओस । प्रत्येक नयां पुस्तामा अन्तरजातीय विवाहको आर्कषण बढदो छ, यसलाई वर्तमान समाजले शिव र पार्वतीलाई जस्तै श्रद्घाले पुजोस । सवै नेपाली आमा दिदी बहिनीहरुमा २०७४ सालको यो तीज पर्वको हार्दिक मगलमय शुभकामना । मजाले नाच्नुहोस ,रमाउनुहोस । एकदिन भएपनि दु:खलाई भुल्नुहोस ।